Diyo post :: अपहरण गरेर एकता गर्न सकिँदैन : रामदीप आचार्य अपहरण गरेर एकता गर्न सकिँदैन : रामदीप आचार्य - Diyo post
अपहरण गरेर एकता गर्न सकिँदैन : रामदीप आचार्य
क्रान्तिको कुरामात्र गर्ने तर क्रान्ति नगर्ने हो भने त्यो त क्रान्तिको बन्ध्याकरण हो । यसरी क्रन्तिको रक्षा हुदैन ।
जनयुद्ध त्यतिकै लडिएको होइन । स्वाधीन राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध त्यो युद्ध थियो । लाखौं जनताका सपना साकार पार्न माओवादीले जनयुद्ध लडेको हो ।
यतिबेला माओवादीहरु विभिन्न धारमा विभाजीत भएका छन् । यसको अर्थ जनताको आन्दोलन विभाजीत हुनु हो । जनयुद्ध एक थान संविधानका लागि मात्रै थिएन । जनवादी राज्य स्थापना जनवादी राज्य स्थापना गर्ने ठूलो सपना जनयुद्धले बोकेको थियो । यद्धपी संविधान बनेपछि राज्यसत्ता बदल्न सकिँदैन भन्ने होइन । तर हामीले त्यो समयमा संविधान घोषणा र जनसेना समायोजन एकैसाथ गरौं भनेका थियौं ।
संविधानसँगै केही कुराहरु जोडिएर आउँछन् । संविधान लागुगर्ने मेसनरी, राज्यको चरित्रले ठूलो भूमिका खेल्छ । राज्य वदलियो कि बदलिएन भन्ने प्रमुख हो । तर संविधान जनताको जिवनमा लागु हुनु पर्छ । संविधान समाजवादी लेखेपनि राज्य प्रणाली पूँजीवादी छ भने त्यहाँ समाजवाद लागु हँुदैन । संविधान कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ । त्यसकारण अहिलेपनि संविधान जस्तो भएपनि राज्यसत्ता कस्तो छ भन्ने कूरा प्रमुख हुन आउँछ ।
हिजो संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी विभाजन भएकै हो । यो दुःखद थियो । हिजो एकता चाहेका जनताले आज पनि चाहान्छन् । यो कार्यकर्ताको पनि चाहाना हो । यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । अब हाम्रो कर्तव्य भनेको माओवादी आन्दोलन अगाडी बढाउने हो, यसलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने होइन ।
एमाओवादीले ‘पूँजीवादी क्रान्ति पुरा भयो’ भनेको छ । हामीले पनि अहिले ‘२००६ सालमा पुष्पलालले भनेको र ५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडीको अवस्थामा छैनौ’ भनेका छौं ।
अहिलेपनि सबै माओवादी बहस गर्न सक्छौं । बहस गर्नु भनेको विगतमा भएका राम्रा नराम्रा कामको समिक्षा गर्नु हो । समिक्षाको अर्थ झगडा होइन । आरोप प्रत्यारोप पनि होइन । समिक्षाले अगाडी बढ्ने बाटो तय गर्छ । गल्तीहरु प्रति निर्मम बनाउँछ ।
‘जनवादी क्रान्ति पुरा भयो’ भन्नेपनि होइन । यतिबेला पूँजीवादको सुरुवात भएको छ, या दलाल पूँजीवाद मौलाएको छ । यसबारे सही विश्लेषण गर्यौं भने कार्यनीति पनि राम्रो हुनेछ । नेपाली समाजको विश्लेषणपछि क्रान्तिको चरित्रको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । क्रान्तिको कुरामात्र गर्ने तर क्रान्ति नगर्ने हो भने त्यो त क्रान्तिको बन्ध्याकरण हो । यसरी क्रन्तिको रक्षा हुदैन ।
अहिलेको मूल उद्देश्य भनेको साम्यवादको यात्रा हो । यात्राका लागि नेपाली मौलिकताको क्रान्तिको बाटो भएर जानुपर्छ । यसबाट समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य लिनुपर्छ ।
त्यसो त नेपालका कुनैपनि माओवादीहरु समाजवाद र साम्यावाद विरोधी छैनन् । उनीहरुबीच एकता हुने आधारहरु छन् । ठूलो आधार जनता हुन । जनताले हिजोपनि एकता चाहान्थे आजपनि चाहान्छन् । माओवादी खूद नेपालको नेतृत्व गर्न चाहान्छ । देश अहिले विदेशी हस्तक्षेपको मारमा छ । यसबाट मुक्ती माओवादीले मात्रै दिनसक्छ, नेतृत्व पनि माओवादीले मात्रै गर्नसक्छ । यो जसले बुझ्छ, उ एकता चाहान्छ ।
समाज विभिन्न धारामा विभाजित छ । यसको छाप सबै पार्टीमा हुन्छ । हाम्रो पार्टी पनि अछूतो छैन । अहिले हामीले गरेको बहस ‘माओवादी आन्दोलनलाई बचाउने र बढाउने विषयमा केन्द्रीत छ । विभाजन वा नेताहरुलाई छोड्ने या एक्ल्याउने भन्ने हुँदै होइन ।
माओवादी एकता अवश्य हुन्छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो । हिजोको समिक्षा हुनु पर्छ । तर एकताको लागि चाहिनेजति सबै गर्नुपर्छ । एकताको आवश्यकतालाई कसैले रोक्न सक्दैन । संविधान एउटा वस्तु हो । यसलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण फरक छ । तर यही कुराले एकता रोक्दैन । विचार भए यो गौण हो । संसार बदल्नेहरुले संविधान बदल्न सक्दैनन् ?
संसारभरी संविधान गतिशिल छ । यो जड होइन । यो अन्तिम सत्य पनि होइन । चाहेको बेला जनताले परिवर्तन गर्नसक्छन् । हो दुर्घटना हुनु भन्दा पहिला सोचेका भए संसारमा दुर्घटना नै हुने थिएन । विभाजन हुनु भन्दा पहिला गहिरो गरी समिक्षा गरेको भए विभाजन नहुन सक्थ्यो ।
माओवादी विभाजन आन्तरिक र वाह्य दुबै कारणले भएको हो । तर उसले आफ्नो पंक्तिमा आफ्नो विचार दह्रो गरी राख्न सकेन । इतिहासमा यस्तो विभाजनामा जनताको ठूलो हिस्सा निर्णायक हुन्छन् । तर कहिलेकाँहि व्यक्तिपनि निर्णयक हुन्छ । तर माओवादी विचारका कारण विभाजित भएको हो ।
माओवादी विभाजन त्यो समयको उपज हो । एकथरीलाई संविधान लेख्छौं,सेना समायोजन गर्छाैं, हामी सबैको नेतृत्व गर्न सक्षम छौ । हामी आन्दोलनबाट आएका हौ शक्तिशाली छौं । संविधान पनि हामी आफ्नो तरिकाले लेख्छौ । त्यो पनि दुइ तिहाइ बहुमत ल्याएर । अर्को समुहले सोचेको थियो, संविधान जारी हुँदा विद्रोह हुने छ । हामी त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्ने छौ । जनता विद्रोहको झण्डा मुनि गालबन्द हुनेछन् । हाम्रो एजेण्डामा देश अगाडि बढ्छ । हामी सफल हुनेछौं । विद्रोह सफल हुनेछ । तर दुबैको सपना विफल भयो । आज माओवादीहरु पराजयमा छन् । कसैले विजय भयौं भन्नु भनेका आफैले आफैलाई ढाँट्नु हो । अहिलेको समिक्षा भनेको पराजयको समिक्षा हो, विजयको होइन ।
के हुँदैछ एकता ?
एकताकोलागि दुबै तिरबाट पहल भइरहेको छ । यो आजको आवश्यकता हो । यसलाई सुदुर भविष्यतर्फ धकेल्नु हुँदैन । तर मिति र तिथीहरु तोकिन सक्ने अवस्था छैन । यो राजनीीतक परिघटना हो । यो आजको आवश्यकता हो । हिजोको होइन ।
माक्र्सवाद छाडेका बाबुराम
बाबरामले माक्र्सवादको झण्डा छोडिसक्नु भो । उहाँले क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सकेको भए सफल मानिनुहुन्थ्यो । इतिहासलाई बढी कोट्याउनु सहि नहोला ।
उहाँले हिजो माक्र्सवाद परिवर्तनको एकमात्र बाटो हो भन्नु भयो आज माक्र्सवादले मात्र पुग्दैन भन्दै हिड्नु भएको छ । अंशमा उहाँ ठिक भएपनि सारमा अब दक्षिणको बाटोमा लाग्नु भएको हो । हिजोको क्रान्तिको सम्मान गर्न नसक्नेले हिजो हिडेको बाटो पछ्याउन सक्दैनभने त्यो मान्छेलाई के भन्ने ? परिवर्तनकारीले हिजोको परिवर्तन संस्थागत गर्नु पर्छ । तर उहाँले त हिजो बोकेको झण्डा छोडि सक्नु भयो यहि अवस्थामा उहाँलाई दुरद्रस्टा भन्न सकिँदैन ।
संविधानकी बन्दूक ?
जनवादी संविधान चाहिएको हो । त्यो भएन भने जनपक्षिय संविधान । ०५२ सालमा संविधान नभएर जनयुद्ध भएको होइन । अगाडी बन्दूक राख्यो भने संविधानभन्दा पहिले कार्यान्वयन हुन्छ । अहिलेपनि संविधान सबै कुरा होइन । यहाँ दूनिया बदल्ने कुरा छ । लक्ष्य राख्यो भने सबै कुरा हुन्छ ।
संविधान बदल्ने भन्दा पनि राज्यबदल्ने कुरा प्रमुख हो । दूनिया बदल्न हिडेकाले आफ्ना दस्तावेज मिलाउन सकिएन भने कसरी देशलाई लिएर समाजवाद र साम्यवादको यात्रामा कसरी जान सक्छ ? यसकारण क्रान्तिको पक्षमा सबै कुरा बदल्नुपर्छ ।
हाम्रो पार्टीका दुई लाईन के हुन् ?
अहिले हाम्रो पार्टीमा बहस भइरहेको छ । यसमा दुइ लाइन छन् । एउटा सिद्धान्तनिष्ठ एकता र अर्को नयाँ आधारमा नयाँ एकता । सिद्धान्त निष्ठ एकता भनेको बाजेका पालाको हो कि अहिलेको अवस्थाको आवश्यकता हो ? अहिलेको आवश्यकता भनेको सृजनशिल विचारमा एकता हुनु पर्छ । सिद्धान्तलाई समृद्ध र विकास गरेर नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुन्छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्वयमसेवकको रुपमा लागेका हौं । यो स्वच्छिक अभियान हो । यसमा कसैसँग करबल हँुदैन । एकता कसैले चाहान्छ भने उसको इच्छा हो । कसैलाई करबल गरेर घिसारेर लिन सकिँदैन । कसैलाई अपहरण गरेर एकतामा लिन सकिँदैन । कसैलाई एकता गरेर पार्टी विचार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्यो भने एकतामा जान्छन् । कसैलाई घिच्याएर फुटमा धकेल्न सकिँदैन । अहिले एकताकोलागि अपिल गर्ने हो । अहिलेको आवश्यकतालाई मिलेर सामना गर्नु पर्छ भन्ने सबैको चाहना इच्छा हो ।